Archive du 20200826
Fifanarahana ara-tany amin’ny karana Nihemotra ny CUA taorian’ny resabe…
Niteraka adihevitra eny amin’ny tambajotran-tserasera amin’izao ilay taratasim-panjakana misy ny sonian’ny Filohan’ny Filankevitra Monisipaly eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Atoa Ralitera Andramparany ny 20 aogositra teo miantso ny Filankevitra monisipaly,
Antenimieram-pirenena Mbola eny amin’ny CCI Ivato ihany no hivory
Araka ny tatitry ny filankevitry ny Minisitra natao tamin’ny alakamisy 20 aogositra 2020 dia antsoina hivory tsy ara-potoana eny amin’ny CCI Ivato manomboka anio alarobia faha 26 aogositra 2020 amin’ny 3 ora hariva ireo solombavambahoakan’i Madagasikara manerana ny nosy.
Dosie mafana Eny amin’ny Fitsarana Avo ny maso
Antoko politika miisa 6 no nanatitra fitoriana teny anivon` ny Fitsarana avo (HCJ) miasika ny raharaham-pirenena ankapobeny no anton` izany fitoriana izany ny alatsinainy lasa teo.
Rivo Rakotovao “Fandaniam-bola fahatany ny fiantsoana anay hivory…”
Ao anatin’ny ara-dalàna, ary nohamafisin’ny HCC izay nangataka tamin’ny Lehiben’ny Governemanta.
Filankevitra monisipaly Antananarivo Hafana ny fivoriana manomboka anio
Hiatrika fivoriana ara-potoana ny filankevitra monisipaly manomboka anio alarobia ary haharitra hateloana izany. Lahadinika voafaritra ho dinihana mandritra izany ny fanitsiana ny tetibolan` ny CUA taona 2020.
Patrick Raharimanana “Omeo ny fokontany ny 50%n’ny tetibola”
Lasa resabe ity “digitalisation” ity tato ho ato, hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena, Patrick Raharimanana. Fahazoan-dalana mamily biometrika, taratasim-piara biometrika, karinem-pokotany, fandraketana an-tsolosaina ireo antotan’isa na “digitalisation” sy ny hafa, hoy izy.
Antaninarenina Mpiambina iray nangalatra volamena 30 grama
Lehilahy iray 24 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria Analakely ny 20 aogositra teo noho ny fangalarana volamena tao amin’ny tranom-barotra iray etsy Antaninarenina.
Ady amin’ny tavoahangy plastika Fantatra ireo tetikasa roa hiatrika ny famaranana
Ankoatra ny fiahiana sy fanampiana ireo sahirana dia mandray anjara mavitrika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny orinasa Star.
Tribonaly Anosy Hisokatra amin’izay ny fitsarana ady madio
Manomboka miverina amin’ny laoniny ny raharaham-pitsarana. Misokatra amin` ny alatsinainy izao
Mahajanga Miverina amin’ny laoniny ny fisokafan’ireo birao rehetra
Araky ny fanapahan-kevitry ny CRCO Boeny omaly talata 25 aogositra 2020 dia efa miverina misokatra amin’ny ora mahaazatra ireo birao rehetra ao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Mahajanga nanomboka tamin’io androan’ny omaly 25 io.
Fernand Cello “Manimba endrika ny filoha ny zava-nitranga tato ho ato”
Notanisain’ny mpanao gazety mpanadihady, mpamakafaka raharaham-pirenena ary kandida ho ben’ny tanana teo aloha, Fernand Cello, ireo heveriny fa raharaha maloto sy maha menatra tao anatin'izay 2 volana teto amin’ny firenena izay.
Barea milalao any Eoropa Samy niverina masiaka avokoa
Azo lazaina ho samy niverina masiaka taorian’izay fahamehana ara-pahasalamana izay ireo kintan’ny ekipam-pirenena Malagasin’ny baolina kitra mila ravinahitra atsy Eoropa.
Barean’i Madagasikara Vonona hiverina an-kianja indray
Maneho ny fahavononany hiverina an-kianja ireo mpilalaontsika. Efa hita taratra ihany koa fa misy fivoarana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana eto amin'ny firenena.
Velirano sa vely kanota ?
Velirano amin’ny fanatanterahana ny programan’asa samihafa ambara fa hoenti-mampandroso ny firenena no nilokalokan’ny Fanjakana ankehitriny.
Gare Routière Maki sy Fasan’ny Karana Nametrahana ivon-toerana vojimaika fitsarana fiarakodia
Mitombo isa sy mihabetsaka ireo fiara tonga manao fitsirihana eto Antananarivo amin’izao fiverenan’ny fitateram-bahoaka hiasa izao.
Fitaterana Hisokatra manomboka rahampitso ny RN5
Nisy ny fepetra manan-kery mandritra ny 15 andro noraisaina taorian'ny fivorian'ny CRCO Analanjirofo ny 24 aogositra 2020,
TAXI BE 6 andro ihany no hisitraka ilay «gel » maimaimpoana
Enina andro ihany raha araka ny fantatra no hisitraka ilay gel fanosotrona amin’ny tanana famonoana mikraoba avy amin’ny fanjakana ireo taxibe eto amintsika manomboka anio alarobia 26 aogositra,
Fifamoivoizana Ho hentitra ny fanaraha-maso ireo fiara WWT
Misy fiara “bonne occasion” miafina anaty taratasy tsy ara-dalàna ka mampiasa ireny « attestation provisoire de circuler » avy amin` ny mpitandro filaminana sy ireo mampiasa laharana « WWT » fa hoe fiara amidy nefa fiara efa manana laharana gasy na fiara tsy vaovao akory,
Tra-doza an-dranomasina Hita soamantsara ny Vedety Fagnole
Tsy hita nanomboka ny sabotsy lasa teo, ny vedety iray antsoina hoe Fignole. Teo anelanelan’ny fari-dranomasin’i Vohemar sy Antalaha no nitrangan’izany. Ny alatsinainy tolakandro teo anefa dia hita soamantsara ity vedety ity, taorian’ny fikarohana azy.
Lalana Arivonimamo - Faratsiho Vitao ny asa, hoy ny Depiote Rodin
Tany mamokatra i Manalalondo, saingy lavitra andriana, noho ny faharatsian’ny lalana. Hetahetan’ireo mponina any an-toerana hatramin’izay ny mba hahavitan’ny lalana, hahafahan’ny vokatra mivoaka araka ny tokony ho izy.
Tsena iraisam-pirenena 250 dolara ny kilaon’ny Lavanila Malagasy
Hisokatra ny 15 septambra izao ny taom-panondranana lavanila eto Madagasikara ka hifarana ny 31 mey 2021.
Fitantanan-draharaham-panjakana Mifampiaro amin’ny ratsy ny mpitondra
Sesilany ny karazana fipoahan-javatra manaratsy endrika ny fitondram-panjakana na “scandale”, izay toa misy miseho foana mila ho isan-kerinandro.
Fampianarana ambony Tsy misy tokontaniny hatreto
Adino sy tsy nisy resaka tamin’ny valan-dresaky ny Filoham-pirenena ny 23 aogositra lasa teo ny tontolon’ny fampianarana ambony.
Printsy Ndriana Rabarioelina “Tokony afindran’ny HCC aminay ny fahefana ”
Misy hatrany Andriandahy, Andriandray, Andriandreny avy ao Avaradrano Zokin'Imerina, Mpandova Fanjakana eto Imerina Enin-toko sy eto Madagasikara, araka ny Hafatr' ireo Razambe Mpanjaka Andriantomara sy ny Mpanjaka Andrianerinerina ary ny Mpanjaka Ralambo,
Mpitsabo Malagasy FITRAMA Tsy miova ny fanafody, miditra amin’ny ara-dalàna
Miroso amin’ny ara-dalana hatrany ny Mpitsabo Malagasy FITRAMA tarihin’ny tale jeneraliny Rafanomezantsoa Jean Nirina amin’izao.
Jeneraly Richard Ravalomanana « Aoka tsy hakiviana ny mpitandro filaminana »
Tonga namangy ireo zandary roalahy voatifitry ny dahalo tany Ampanihy Miandrivazo ny fianakaviamben'ny Zandarimaria izay notarihin'ny Jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria (SEG) sy ny Jeneraly Komandin'ny zandarimariam-pirenena, teny amin'ny Hopitaly miaramila Soavinandriana, omaly maraina.
Bazar Ankirihiry Toamasina Tratra ilay lehilahy mpanendaka sady mpisoloky
Lehilahy iray 25 taona no voasambotry ny Polisin’ny UIR Toamasina ny 24 aogositra 2020 lasa teo teny amin’ny Bazar Ankirihiry Toamasina noho ny resaka sinto-mahery.
Fitsarana Miparitaka ny didy hosoka
Miparitaka amin’izao fotoana izao ny didim-pitsarana hosoka ka isan’ny ahitana izany betsaka ny fisaraham-panambadiana, ady tany,…,
Orinasa afakaba Nikatona ny 4 tamin’ireo mpikambana GEFP
Sehatr’asa isany nitondra nisedra fahasahiranana tao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina coronavirus izao ny orinasa afakaba. Ho an’ireo mivondrona eo anivon’ny GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires)
Fepetra ara-pahasalamana Mampiana-dratsy ny vahoaka ny Filoha
Nisy omaly ny fidinana ifotony nataon’ny Filoham-pirenena teny amin’ny Orinasa Akanjo teny Ambatomaro.
Coronavirus 73 ny tranga vaovao, 75 marary mafy
Mijanona ho 178 hatrany ireo lavon’ny covid-19 teto Madagasikara satria tsy nisy namoy ny ainy tao anatin’ny 4 andro.
Minisitry ny fahasalamana “Tsy atahorana ny 2ème vague amin’ny Covid-19…”
Midina dia midina ny isan’ireo izay ahitana ny trangan’aretina covid-19, hoy ny Minisitry ny fahasalamana Atoa Rakotovao Jean Louis. Miteny ianareo hoe “2ème vague”,